Ndeupi mubairo wezita uye mubairo chaiwo. Misiyano | Ehupfumi Zvemari
Claudi casals | | Basa
Patinotsvaga basa imwe yeiyo nyaya dzatinowanzofunga nezvadzo mubhadharo; Sezvo zviri kutsvaga kuti izvi zvinoenderana nenguva yakadyarwa, uye zviito zvinoitwa, zvakare tichifunga kugona kwemunhu kuita basa nemazvo uye zvinobatsira hupfumi hwekambani. Zvino, chaizvo, ingani nguva yedu inokosha? Marii yatinoda kuti tiwane kubhadhara zvinodikanwa zvedu?
Kumwe kwekusahadzika kazhinji ndiko kuziva iyo mutsauko pakati peicho chaicho muhoro uye chezita muhoroNaizvozvo, pazasi isu ticha tsanangura izvo imwe neimwe inoumbwa uye kuti vanosiyana sei.
1 Chii chinonzi muhoro?
2 Pfungwa dzezita remubhadharo uye chaicho mubairo
2.1 Nezita muhoro
2.2 Mari chaiyo
3 Ndeupi musiyano uripo pakati pezita remubhadharo uye chairo mubairo?
3.1 Simba rekutenga, simba rekutenga
3.2 Mahoro ese ari maviri anofanira kuwedzera sei
4 Mhedziso yemazita emari uye muhoro chaiwo
Chii chinonzi muhoro?
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuziva icho muhoro ndiyo mari inogamuchirwa nemushandi, kazhinji nguva nenguva (inowanzoitwa pamwedzi). Kubva pane izvi unogona kusiyanisa yezita remubhadharo uye iwo chaiwo mubairo, wandichatsanangura pazasi:
Pfungwa dzezita remubhadharo uye chaicho mubairo
Pane mazwi maviri ekuratidza muhoro uyo mumwe anayo, pano mubvunzo unomuka kuti sei zvichidikanwa mazwi maviri emubhadharo mumwe chete, sezvo chokwadi chekuti kune maviri hazvireve kuti iyo mihoro miviri inogamuchirwa, asi asi mazwi aya anoshanda kuratidza zvinhu zviviri zvinoonekwa sezvakakosha pamubhadharo; mazwi aya zita remari uye muhoro chaiwo, Tevere, tsananguro ipfupi yeicho chimwe nechimwe chazvo chine izvo ichapihwa.
Izwi rekuti nominal wage rinoreva iyo muhoro chaiwo unoratidzwa mumari; Ndiyo huwandu hwemari inobhadharwa kumushandi pabasa rakaitwa mukati mezuva rakatarwa. Kana tichitaura nezvemubhadharo wezita isu hatigone kutipa pfungwa yakajairika nezve iyo chikamu kana kukosha chaiko kwemubhadharo. Iko kukosha kwechokwadi kwemubhadharo uyu kunoenderana zvachose padanho remitengo inoenderana nezvinhu zvekushandisa zvega, zvakare nezve kukosha kwemasevhisi anodikanwa, pamwe neuwandu hwemitero, pakati pezvimwe zvakajairwa mari.
Parizvino, mune idzo nyika uko iyo system inodzora kutora ndeyeCommunityism, kunyangwe paine kuitika kwechiri pachena kuwedzera mukutaura kwemubairo maererano nemutengo wayo wemariIzvo zvinoonekwa semubhadharo chaiwo unogashirwa nevashandi unodzikira nekuda kwekuwedzera kwemitengo yezvinyorwa zvinoonekwa sezvinyorwa zvekushandisa zvakawandisa, zvichireva kudyiwa kunoitwa nemushandi kuti agutse zvido zvake; Uku kuderera kwekukosha kuri kukonzerwa nekuwedzera kwemitero, izvi imhaka yekuti chinangwa chehurumende ndechekuti vashandi ndivo vakatakura mutoro wese unogadzirwa nekuda kwekuomerwa kwehupfumi uye huremu hunogadzirwa nebasa rezvombo.
Pane zvinopesana, munharaunda dzinotongwa nehukama, zita remihoro rinowedzera - kunyanya kana ichireva zvikamu zvevashandi nevashandi vanowana mari shoma-, kana ichiperekedzwa ne kuderedzwa kwemutengo yezvinhu zvevatengi zvekutanga zvevashandi, iyo inonzi mubhadharo chaiwo wevashandi vese yakawedzerwa zvakanyanya. Chikamu chakakosha kwazvo chinoumba ichi ndicho mubatsiri wezita remubhadharo, iyo inopihwa neyemagariro yevatengi mari, izvo zvakagadzirirwa kugutsa zvishuwo zveruzhinji zvemitezo yese yenzanga yemagariro. Kugoverwa kunoitwa neSocialist State uye nemamwewo masangano ehukama akagadzirirwa izvi zvinangwa, anowedzera mushandi chetatu mari inowanikwa nevashandi. Sezvo kugadzirwa kwenzanga kuchiwedzera uye panguva imwechete kukosha kwevashandi kuchikwira, zvishoma nezvishoma mwero wevashandi, vashandi nevadzidzi vanozosvika kusvikira vagara padanho rimwe chete.
Iyi dudziro inoreva muhoro unoratidzwa zvine chekuita nehupenyu uye masevhisi pane izvo mushandi ane muhoro wake; Iyo inoratidza huwandu hwezvinhu zvevatengi izvo mushandi anokwanisa kuwana, pamwe nemasevhisi ayo mushandi anogona kutenga nemubhadharo wake wezita (unochengetwa mumari yemari iyo mushandi anogamuchira). Iko kukosha kunogona kupihwa kune chaicho mubairo kunoenderana pane akati wandei kufunga, pinda zvimwe zvacho zvinoenderana ne ukuru hwezita remubhadharo, chimwe chinhu ndeye chikamu chemutengo zvinoenderana nezvinhu zvevatengi uye zvakare nhanho yemitengo yebasa, ukuru hwavo hunotemerwa nemutengo wemaroja nekuda kwemitero yakatemerwa vashandi nehurumende.
Munyika dzinotongwa neCapitalism, zvinowanzoitika ndezvekuti iyo chinhu chinodhura uye zvakare iyo yemasevhisi, kuwedzera kune rendi nemitero, iri kukura ichienderera mberi. Kirasi kirasi iriko mune aya masisitimu inokonzeresa iwo wekuti mugeji kuti uchinje zvakare. Ndiwo mutemo we capitalism uyo mubhadharo chaiwo wemushandi kuzvibata nenzira yekuda kudzikira. Munyika idzi dzinotongwa nehurongwa hwemakapitalisheni, chiitiko chinoitika chinokanganisa zvikuru mubairo chaiwo, mashandiro enzira dzekugadzira uye kugadzirwa kunoitwa, zvinosanganisira chokwadi chekuwedzera huwandu hwevashandi nevashandi vari pasi- vane hunyanzvi uye saka vashandi ava gamuchira yakaderera yezita muhoro izvo kune imwe nhanho zvinokanganisa zvakashata kukura kwemubhadharo chaiwo.
Kunyangwe iyo kirasi kukakavara kuchikonzera kuti zita rekuti mubairo riwedzerwe, chokwadi ndechekuti kukwira kwezita remubhadharo hakunyatso kubhadharisa kudzikira kwehukuru hwemubhadharo chaiwo, sezvo zvimwe zvinhu zvinozvisarudzira, semitengo zvinyorwa zveKushandisa nemitero zvinodiwa zvinokura nekukurumidza kupfuura mubairo wezita. Neiyi nzira tinogona kuona kuti maitiro akajairika, kunyangwe hazvo mari yezita ichisimuka, ndeyekuti nguva yega yega mushandi haakwanise kutenga zvigadzirwa zvevatengi. Nzira iyo hurumende kana masangano anotarisira kushoropodza nekugadzirisa zvinhu izvi kuverenga avhareji chaiyo mubhadharo wevashandi iri, kwete kumapoka akati wandei, asi kuhuwandu hwemubhadharo wevashandi nemubhadharo wevashandi. Vashandi vanobhadharwa zvakanaka, vachiwedzera izvo zvemaneja emakambani uye madhairekitori, dzimwe nhengo dzenzanga, kunyangwe yavo yezita muhoro yakaderera kana yakakwira.
Pasi pemakomisheni anotungamirwa nesocialism, iyi nyaya inobatwa neimwe nzira nekuti muhoro haukoshese kukosha kwevashandi, izvi zvinoreva kuti Mari yemushandi haibvi pane kudzidziswa kweizvi, asi asi zvinechekuita nehunhu hunhu hunogoneswa zvabuda mushandi; Asi, inomiririra kutaura mumari yechikamu chemari yenyika inowirirana nevashandi nevashandi vekambani kana indasitiri kuitira kuvhara zvido zvekushandisa wega Sezvakafukidzwa kare, mari yenyika ino inoparadzirwa zvinoenderana nemhando yebasa, asiwo huwandu hwayo. Zvinoenderana nechimiro cheiyo kugadzirwa kwesocialist system kufambira mberi, mubhadharo chaiwo uri kuramba uchiwedzera. Nharo ndeyekuti iyo chaicho mubairo unobva pane kugadzirwa kwevashandi muhupfumi hwenyika. Vashandi venzanga yemagariro vane mubatsiri akakosha wemubhadharo, mubatsiri unobva pamari yevatengi yemagariro, iyo inokwidza mari chaiyo yevashandi vevanhu vezvematongerwo enyika nechetatu.
Ndeupi musiyano uripo pakati pezita remubhadharo uye chairo mubairo?
Nzira yakanakisa yatinokwanisa kupatsanura uye nekudaro tichikwanisa kududzira mutsauko uripo pakati pemhando mbiri dzemubhadharo, nhema mumasikirwo avo. Ndichiri yezita mubhadharo yaizokanganisa iyo nhamba chikamu uye tinogamuchira marii, iyo chaiyo muhoro yaizove yakanyanya kutarisa mukuwana zvigadzirwa uye vangani vatingawane. Kunyangwe chikamu chezita (kana nhamba) chine mukana wekuchinjaniswa kune zvigadzirwa zvirinani kana kuchinjana kuri nani kune dzimwe mari zvine chekuita nemitemo yemari yedunhu rega rega. Nekudaro, kunyangwe hazvo zita remubhadharo riri iro rakanangana uye rakareruka chikamu kuturikira, muchokwadi chikamu chakakosha ndechekuti tingakwanise kuita sei nacho (chaicho mubairo). Kuti tiite izvi, tichaona mutsauko wakakurumbira pakati peumwe neumwe uye kuti inflation inopedzisira yavakanganisa sei.
Simba rekutenga, simba rekutenga
Pakati pezvose, chakanyanya kukosha isimba rekutenga iro mushandi anaro. Izvo zvinowanzo shandura pamusoro penguva uye kufamba kwevashandi kune inflation, iyo inoshandura kune inotevera:
Chezita Mubhadharo: Icho chikamu chikamu chinotonga. Huwandu hwemari yakagamuchirwa. Asi izvi hazvireve kuti tine zvakawanda, sezvo mari chishandiso chekutenga zvigadzirwa. Kana mutengo wezvigadzirwa ukakwira uye mubairo wedu wezita wakaderera, isu tinokwanisa kutenga zvishoma. Mune ino kesi, iyo yemahara muhoro ndiyo kukosha kunoratidzwa mubhadharo, semuenzaniso, € 1.300 pamwedzi.
Chaicho Mubhadharo: Chingave icho "chemuviri" chikamu chezita remubhadharo, ndiko kuti, huwandu hwezvigadzirwa zvatinogona kutenga. Munhu uyo ​​makore gumi nemashanu apfuura akagashira € 15 uye, semuenzaniso, anoramba achiwana 1.300 mazuva ano, mari yake yezita angadai asina kuwedzera kana kuderera. Nekudaro, inflation uye mutengo wehupenyu ungadai wakakwira, saka ne € 1.300 nhasi ndinogona kutenga zvinhu zvakaderera pane makore gumi nemashanu apfuura.
Kuti zvive zvakanyatsojeka, mumakore gumi nemashanu apfuura avhareji inflation mwero munzvimbo yeEuro yanga iri 15%. Izvi zvinoreva kuti mumakore gumi nemashanu mutengo wekurarama wakwira 15%. Dai munhu akagashira 1.300 makore gumi nemashanu apfuura, nemubhadharo we € 15, vangadai vakachengetedza € 1.000 pamwedzi. Mubhadharo wake chaiwo waimupa kunonoka. Nekudaro, dai muhoro wake wakachengetedzwa, nhasi mutengo iwoyo wekurarama waizomutorera € 300, saka angadai akachengetedza e1.260 euros pamwedzi. Mubhadharo wako chaiwo mune ino kesi unenge wakaomesesa.
Mahoro ese ari maviri anofanira kuwedzera sei
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, kunzwisisa mihoro yedu inofanira kusimukira zvakadii kuitira kuchengetedza mwero wehupenyu hwedu. Tichifunga nezve chokwadi chekuti muhoro chaiwo ndiwo watinotsanangudza nawo kuwana zvigadzirwa, zvisinei nemari inoshandiswa mubhadharo wedu, chinangwa chedu kazhinji ndechekuchichengeta kana kuwedzera icho. Kuti uone kana simba redu rekutenga rave nani, ngatitarisei inflation.
Kuchengetedza iro rakafanana simba rekutenga, ndokuti, mubairo chaiwo, yedu yezita mubairo unofanirwa kuwedzera zvinoenderana ne inflation. Izvi zvinoreva kuti kana gore rimwe inflation yakawedzera nezvikamu zviviri kubva muzana, mibairo yedu yezita inofanirwawo kuwedzera ne2%. Nenzira iyi, mubairo chaiwo unogona kuchengetedzwa.
Kuwedzeredzwa kwezita remari pamusoro pe inflation kwaizotungamira kune chaicho chaicho mubairo nekuti yedu yekutenga simba yaizowedzera. Ndokunge, kana inflation gore rimwe riri pa2%, sekureba sekunge muhoro wedu uchiwedzera ne2% kana kupfuura, isu tichavandudza simba redu rekutenga.
Kuti izvi zviitike, isu tinofanirwa kuyeuka kuti patinotaura nezve 2% yezita remari yekuwedzera, isu tinofanirwa kutarisa muhoro wemambure. Iyo muhoro muhoro unogona kuwedzera mumutsara mumwechete ne inflation, ne2%. Nekudaro, kuwedzera uku hakugone kuratidzirwa mumubhadharo wemambure kana zvakabviswa mubhadharo zvichikwirawo kana uchipinda mune rakasiyana mutero bracket.
Mhedziso yemazita emari uye muhoro chaiwo
Mukupedzisa, tinogona kutaura kuti iyo zita remari muhoro uyo mushandi anotambira mukutsinhana nebasa rake; kune rimwe divi, izvo zvinotsanangurwa se muhoro chaiwo unowirirana zvakanyanya nemutengo wezvigadzirwa nemasevhisi izvo zvinodiwa kusangana nezvinodiwa.
Mune mamwe mazwi ehupfumi, iyo chaiyo muhoro inoratidza izvo muhoro unokwanisa kutenga, ingave simba rekutenga remushandi kana achigamuchira muhoro wake; Zvinoonekwa kuti rudzi urwu rwemubhadharo rwakakanganiswa ne inflation, ndiko kuti, kukwira kwemitengo nekuda kwezvinhu zviri kunze kwekudzora.
Kuti tinzwisise zvirinani musiyano uripo pakati peumwe neumwe, chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuatsanangura chaizvo. Zvemazita muhoro ndiyo huwandu hwemari iyo mushandi anowana, nepo iwo muhoro chaiwo uri maererano nemitengo yezvigadzirwa nemasevhisi.
Musiyano mukuru uye wakakosha ndewekuti iyo zita remubhadharo rinogona kuwedzerwa pasina hazvo kuwedzera hupenyu hwavoIzvi zvinoreva kuti ese ari maviri mitengo yezvigadzirwa nemasevhisi anogona kukwira zvakanyanya kana muchiyero chakaenzana nemari yezita. Nekuda kweizvi, ndiwo muhoro chaiwo unopa nenzira inoshanda zvakanyanya izvo iyo muhoro inonyatso kukosha, ndiko kuti, izvo izvo mushandi anogona kutenga nemubhadharo wake.
Kana zvinhu zvese zvikaungana kuti iyo kuwedzera chaiko kwemari kunoonekwa seinofadza nhauIzvo zvakanaka nekuti zvinoreva kuti mushandi anogona kuwana zvimwe zvigadzirwa uye masevhisi anogutsa zvido zvavo; kune rimwe divi, kana zvikadzika, zvinoreva kuti vane simba shoma rekutenga, uye nekudaro kugona kwavo kugutsa zvido zvavo kunodzikira.
Iwe une kusahadzika nezve chii chiri muhoro muhoro? Tinokuudza:
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve base base muhoro
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Ndeupi mubairo wezita uye mubairo chaiwo
Davds- Software yemubhadharo uye mihoro akadaro
Uye iwo mubvunzo ungamuka wekuti ndeipi yakanyanya kukodzera uye inoenderana chinhu yekupa mushandi.
Kugovera mibairo inoenderana nedata uye nekufananidza izvo zvinokwanisa kutipa iyo chaiyo ruzivo kugutsa zvido zvemushandi maererano nebasa rake chinzvimbo zvinogona kutogoneswa nezvakawanda nemadhijitari maturusi, kuti vaite mubhadharo wakaenzana pamabasa avo.
Pindura maDavds- Software yemubhadharo uye mihoro
Susana Maria Urbano Mateos akadaro
Mhoro Davds, kuno kuSpain, iyo mibairo inoenda nezvibvumirano zvakasangana, zvinoenderana nebasa raunoita, iwe uri muchibvumirano uye une muhoro muhoro, kune rimwe divi mushandirwi anogona kukupa iwe muhoro waunoda, asi haugone kumiswa chibvumirano chako. Izvo zvakanaka ndizvo zvaunotaura, asi isu tichiri padhuze neiyo system, zvirinani pano. Kwazisai uye nekutenda nemupiro.
Pindura Susana Maria Urbano Mateos
Itzel - Mubhadharo tabulator akadaro
Ndatenda nechinyorwa.Ndinoona nzira iyo nyaya yacho inotaurika nayo inonakidza kwazvo. Ndinoda kukuudza kuti ndakaverenga zvinyorwa zvinoverengeka nezvenyaya iyi uye iyi ndiyo yandaifarira zvakanyanya. Makorokoto, ndinotenda nguva yamakatora kuinyora.
Pindura Itzel - Mubhadharo Tab
Oiri inogadzira nyika